Lunn Set Noe Myat | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: Lunn Set Noe Myat
ဘဝမှာ မကြာခဏ ရေမီးမစုံလင်လို့
တစ်ကိုယ်တော်ဆန္ဒ ထထပြတတ်တဲ့ ကံ့ကော်
အရေးတကြီး ဖုန်းလှမ်းလှမ်းဆက်တတ်မြဲ အိမ်နီးနားချင်း ပိတောက်နဲ့
မီတာခတွေ ဈေးတက်သွားပြီ ပြောပြောနေ ရင်ခတ်တွေ။
ပထမ မီးမရှိ ဖယောင်းတိုင်ထွန်း
ခမျာမှာ တစ်နေကုန် တစ်နေခမ်း
Categories: Kabyarz | Tags: လွန်းဆက်နိုးမြတ်, Kabyarz, lanolay, Lunn Set Noe Myat | Permalink.
ဟိုတစ်ပုဒ်ရဲ့ တခြားတစ်ဖက် (လွန်းဆက်နိုးမြတ်)
အခန်းနံပါတ် အိမ်နံပါတ် လမ်းအမည်
ရပ်ကွက်ရဲ့ မြေမျက်နှာပြင် အနေအထား
ခုထက်ထိ ရောက်မလာတော့ တစ်ခုခုများဖြစ်နေသလား (ဖြစ်ခဲ့သေးသလား)
မရှိတုန်းမှာ လာသွားလို့လွဲသွားတာများလား အိမ်နီးချင်းတွေကိုလည်း မေး
ကြည့်တာပဲ ဘယ်သူကမှ ဂဃနဏ မပြောပြနိုင်ဘူး။ ဦးဦးတစ်ယောက်တော့
နေ့ လည်က ဒီလမ်းထဲလာသွားတယ်။ ကလေးတွေ
မေးကြည့်တော့ အဲ့သည်လိုဖြေတယ်။ စောင့်နေတဲ့ လူကြုံဆိုရင် ဒုက္ခပဲ
(Aရေးကြီးတယ်) ဒီနားတ၀ိုက်မှာ မသိတဲ့သူမရှိပါဘူး နာမည်ကြားလိုက်ရင်
တစ်ယောက်ယောက်ကတော့ လမ်းညွှန်ပြမှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ပြီးတဲ့ညက
နေ့ ခင်းဖက် အိပ်နေတုန်း လာသွားတာများလား မနက်ပိုင်းထပြန်သွားတဲ့
ဘောလုံးပွဲအပြီးပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းက အပြင်က သော့ခတ်ပြီးအခန်းထဲ
ဒါမှမဟုတ် ရောက်ကိုမရောက်လာသေးတာလား အခန်းရှေ့မှာတော့ နံပါတ်မှိန်
နေတဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံကလွဲရင် ဘာမှရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက် မရှိပါဘူး၊ ဖိနပ်က
မစီးတာကြာလို့ ဖုန်တက်နေတယ်၊ သည်အခန်းမှာနေတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်။
လူကြုံက ရအောင်ရှာရောက်အောင်တော့ လာနိုင်မှာပါ၊ လမ်းလွဲနေလို့ 
မရောက်နိုင်တာများလား၊ တခြားလမ်းဖက်ကနေ လှည့်ပြန်သွားတာများလား
သြော်…. ဒါနဲ့ အခန်းနံပါတ်ပြုတ်နေတာ သူ မလာခင် မြန်မြန်ပြုပြင်ရဦးမယ်။
သူက ဘယ်လိုပုံစံရှိမလဲ၊ ကြားရသလောက် အရင်က ဒီနယ်မြေကို တစ်ခါမှ
(ရည်ညွှန်း – လူကြုံမှာလိုက်တယ်၊ အောင်ပြည့်စုံ)
၁၆.၁၂.၀၈ ညနေ ၄း၀၆ နာရီ
(နာမ် [သစ္စာနီ၊ ဟိန်းမြတ်ဇော်၊ လူဆန်း၊ လွန်းဆက်နိုးမြတ်၊ မြေမှုန်လွင်]။ ငါတို့စာပေ – မတ်၊ ၂၀၁၀။)
Categories: Kabyarz | Tags: နာမ်, လွန်းဆက်နိုးမြတ်, Kabyarz, lanolay, Lunn Set Noe Myat, modernist poetry | Permalink.